जनार्दनको प्रश्न : सिन्धुपाल्चोकका जनतालाई कतिन्जेल त्रासमा बस्न बाध्य पार्ने ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले भूकम्प केन्द्रबिन्दु परेका सबै बस्ती सार्न माग गरेका छन् । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका केन्द्र बनेका क्षेत्रको बस्ती सार्न शर्माको माग छ ।
भूकम्पको केन्द्र परेका ठाउँ बाढी र पहिरोको त्रासमा रहेको भन्दै उनले सरकारसँग सबै बस्ती सार्न माग राखेका छन् । ‘अब धेरै भयो !’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनले ‘सिन्धुपाल्चोकका जनतालाई कतिन्जेल त्रासमा बस्न बाध्य पार्ने ?’ भनि प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘अब धेरै भयो ! सिन्धुपाल्चोकका जनतालाई कतिन्जेल भुकम्पको त्रास र पहिरोको जोखिममा बस्न बाध्य पार्ने ? मनोबैज्ञानिक भय र जुकजुकी बाट समेत मुक्त गर्न भुकम्प केन्द्रबिन्दु परेका सबै वस्ती सारौं ।’
अब धेरै भयो ! सिन्धुपाल्चोकका जनतालाई कतिन्जेल भुकम्पको त्रास र पहिरोको जोखिममा बस्न बाध्य पार्ने । मनोबैज्ञानिक भय र जुकजुकी बाट समेत मुक्त गर्न भुकम्प केन्द्रबिन्दु परेका सबै वस्ती सारौं ।।
— Janardan Sharma (@JSPrabhakar) September 16, 2020
हालैमात्र सिन्धुपाल्चोकको जुगल र बाह्रबिसेमा भिषण पहिरो गएको थियो । जुगलको लिदीमा गएको पहिरोमा ३७ जनाको ज्यान गएको छ भने २ अझैसम्म वेपत्ता छन् । त्यस्तै बाह्रबिसेमा हालसम्म पहिरोमा पुरिएका १५ जनाको शव भेटिएको छ । बाह्रबिसेमा १६ जना अझै वेपक्ता छन् ।
लिदी र बाह्रबिसे दुवै ठाउँमा पहिरोले दर्जनौं घरमा क्षति बनाएको छ । साथै पहिरोले सयौं परिवारलाई जोखिममा पारेको छ । उक्त जोखिमलाई देखाउँदै सरोकावार निकायले पनि बस्ती स्थानान्तरणकाे विषय उठाएका छन् ।
६ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक…
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम भारतीय मिडियामा भाइरल ‘भारतको अगाडि नेपालले घुँडा टेक्यो’
डा. केसीको उपचारका लागि डा. मल्लको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय चिकित्सक टोली गठन
हेर्नुहोस् यस्तो छ नेपालमा असोज ६ गतेसम्मको कोरोना अपडेटको पूर्ण विवरण
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा आज २ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२९ पुग्यो